Nonionic Polyacrylamide emepụta na suppliers | Oubo
Nonionic polyacrylamide bụ a elu polima na elu molekụla arọ na ala ion exponent, nke nwere ọrụ nke flocculation, dispersal, ndim, bonding, film akpụ, gelatin na colloidal kwụsie ike. Ọ bụ flocculation bụ na o siri na-enwe mmetụta na PH uru na nnu, na na usoro nke acid n'efu mmiri ọgwụgwọ, ya bara uru mmetụta dị n'ọkwá ka nke anionic polima.
Mine Ịsa: The ngwaahịa nwere ike ji mee coal saa tailing centrifugal nkewa, ike ga-eji na sedimentation na filtration nke coal ntụ ntụ na coal apịtị, na ike melite mgbake ọnụego coal powder na filtration ọsọ.
Textile Inyeaka Ukwu: The ngwaahịa nwere ike kwukwara na ụfọdụ ndị ọzọ ọgwụ iji kwadebe chemical grout, a na-eji Starch textiles, nwere ike melite nyagide property, penetrability na desizing arụmọrụ, na-enyere ndị akwa nwere electrostatic mgbochi arụmọrụ, ebelata desizing ọnụego, na ebelata starch agwakọta tụrụ, ákwà igwe agbasa arụmọrụ, na-ada ada akpọkwa.
Nsị Water Ọgwụgwọ: Mgbe nsị mmiri usoro ndị acidophilic, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị iji họrọ nonionic-polyacrylamide, ngwaahịa nwere ike ekwekọghị na flocculating gị n'ụlọnga PAC, aluminum sulphate na dị ka, na ya nwere mma mmetụta na mmiri ọgwụgwọ.
Metallurgical Ịnweta Mgbakwasa: Ọ nwere ike na-eji na floatation na n'oké nke Zinc, manganese na ọla kọpa mines, ya leachate na slag nwere ike kwukwara n'ime Pam mma nkewa arụmọrụ.
Previous: Polyacrylamide Cationic
Nnukwu Nonionic Polyacrylamide
High Ọcha Nonionic Pam Polyacrylamide